Sacuudiga: Hey’adda Dib-u-eegidda Iyo Laaxintirka Axaadiista Nebiga! – Maandoon
Dowladda Sacuudigu waxay ku dhawaaqday in ay abuurayso hey’ad hubinaysa sida loo adeegsanayo axaadiista nebiga (scw). Boqorka Sacuudiga -Boqor Salmaan bin Cabdicasiis- wareegto uu Talaadadii soo saaray wuxuu ku amray in la sameeyo hey’ad dib-u-eegid ku samaysa axaadiista nebiga, isla markaana la socota sida loo isticmaalayo axaadiista.
Wasaaradda warfaafinta dalkaas oo arrinkaan ka hadashay waxay sheegtay in hey’addu isha ku hayn doonto sida loo macnaynayo axaadiista iyada oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay in meesha laga saaro axaadiista beenta ah ee nebiga loo tiiriyo, isla markaana laga hortago in axaadiista loo adeegsado dhiirigelinta denbiyada, xagjirnimada iyo argagixisada.
Hey’addaan oo loo bixiyey “مجمع الملك سلمان للحديث النبوي ” waxaa xarunteedu noqonaysaa magaalada Madiina Al-Munawara, waxaana madax looga dhigay wadaad lagu magacaabo Shiikh Maxamed bin Xasan al-Shiikh oo xubin ka ah hey’adda culumada ee waddankaas, isla markaana ka mid ah durriyadda Shiikh Maxamed bin Cabdiwahaab oo ah wadaadka loogu abtiriyo firqada Wahaabiyada, ahna ninkii heshiisku dhexmaray Maxamed bin Sacuud-ka qoyska boqortooyadu ay ku abtirsadaan.
Waxaana muuqata in bulshada Sacuudigu si weyn ugu qaybsan tahay go’aanka hey’addaan lagu samaynayo, oo wareegtada waxaa soo dhaweeyey qayb bulshada ka mid ah, oo u aragta in uu gacan ka gaysanayo ka takhalusidda xagjirnimada iyo argagixisada. Laakiin dhanka kale, wareegtada waxaa ka biyo diiday qayb kale oo bulshada ka mid ah, oo iyagu u arka in danta laga leeyahay ay tahay in diinta loo sandulleeyo siyaasadda, ka dib marka axaadiista nebiga laga faraxasho oo shaqadeeda la curyaamiyo.
Dhawaan bay ahayd markii dowladda Sacuudigu ay si hoose u xakamaysay hawlihii “Hey’adda same faridda iyo xumaan reebidda هينة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر”, dhanka kalena ay abuurtay hey’ad cusub oo loo bixiyey “Hey’adda Guud Ee Madadaalada الهيئة العامة للترفيه” oo ku shaqo leh arrimaha dhaqanka iyo fanka.
Dowladda Sacuudiga waxaa lagu eedeeyaa in tan iyo toddobaatanaadkii qarnigii tagay ay hanti malaayiin dollar ah ku bixisay sidii fikirka Wahaabiga dunida loogu faafin lahaa (=gaar ahaan dunida Islaamka iyo waddamada reer Galbeedka). Dhanka kalena, Sacuudiga waxaa lagu eedaynayaa in ay xadgudubyo waaweyn ka geysanayso dalka Yaman. Intaa waxaa dheer, in gudaha dalkaas uu ka socdo dhaqdhaqaaq isbeddel doon ah oo wajiyo badan leh- siyaasad, dhaqaale, dhaqan.
Dadka u kuurgala ummuuraha Sacuudigu waxay sheegayaan in dowladda Sacuudigu ay ku mashquulsan tahay sidii ay dunida ugu gadi lahayd Wahaabiyo maqaar calmaaniya dusha laga huwiyey. Hase ahaatee, qoyska boqortooyadu wadaaddada iyo calmaaniyiinta midkoodna kalsooni kuma qabaan, maxaa yeelay luqadda jihaad doonka ah ee colaadda iyo nacaybku ka buuxo ee wadaaddadu adeegsadaan waxay si toos ah uga horkeenaysaa beesha caalamka, dhanka kalena baaqa calmaaniyiinta ee dimoqraadiyadda iyo furfurnaanta dalbanayaa wuxuu halis ku yahay awoodda qoysku talada waddanka ku haystaan.
Isku soo duuboo, Sacuudiga waxaa ka socda isbeddelo dhaqso badan oo ay adagtahay in saadaal buuxda laga bixiyo natiijada ay dhali doonaan.
← Qiil loo heli maayo wixii soobbe ka dhacay hadday saadambe dhacaan!
Soo laabashada islaamka dhexdhexaadka ah →
March 22, 2018 Cali Cabdigiir 1